आत्तिएको मन विकल्पको खोजिमा: लकडाउन त अबसर पो बन्यो!
> आत्तिएको मन विकल्पको खोजिमा: लकडाउन त अबसर पो बन्यो!
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार २३:०८
गुल्मी ,२७ असोज। । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गर्दा पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा त सबैभन्दा बढीनै परेकाे छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मात्रै २० लाख भन्दा बढीको रोजागरी गुम्ने समेत देखिएको छ । पर्यटनसँग आवद्ध संघसंस्थाका अनुसार यो क्षेत्र आबद्ध करिब ११ लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्ने छ । त्यसै गरी यातयात क्षेत्रआवद्ध करिव १० लाख श्रमिक पनि रोजगारबाट विमुख हुन सक्नेछन् । साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिएको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि बहुसंख्यक मात्रामा रोजगारी गुम्न सक्ने उद्योगीले बताएका छन् । धेरै युवाहरूलाई बिदेसबाट स्वदेस ल्याइएको छ । सीप र योग्यता भएका युवाहरूलाई बेकामे बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आयेको छ ।
सौन्दर्य ब्यबसायमा आबद्ध बिमला नेपाल रुपन्देहीमा एक ब्युटीपार्लर खोलेर बसेकी छन । उनले बिदेशी भुमिमा गएर लगभग एक दसक ब्युटीपार्लरमा काम गरिन । बिदेशमा सीकेको सीप आफ्नो देश, त्यस्मा पनि आफ्नै ठाउमा सदुपयोग गर्ने सोच बनाईन । नेपालमा काम गर्ने सोच सङै को नयाँ अनुभव भर्खरै चाख्न मात्र लागेकी थिइन । त्यतिकैमा चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसले एक माहामारी को रुप लियो र नेपाल सम्म आइपुग्यो । नेपाल लकडाउनमा गयो । उनको पार्लर पनि बन्द भयो । नयाँ ठाउमा काम गर्ने जोस किनारा लाग्यो । उनी भन्छिन “बिदेश मा मेहनत गर्ने बानी परिसकेको रहेछ । भित्र भित्रै बस्दा २ र ४ दिनमा नै धेरै आत्तिए , निकै छट्पट्टी भयो ।
मनिसहरुलाइ जस्तो परिस्थितिमा पनि बाच्नु परेको छ । हाल संक्रमण जोखिमका कारण देसमा असैय पिडा सहनु परेको छ। अकल्पनीय घटना भोग्नुपरेको छ । अनेकौं रोगबाट बच्नु छ । सामना गर्नुछ । कोरोना संक्रमण जोखिमबाट जोगिन परेको छ । हामी काम गर्न छाडेपनि खान र अत्याबस्यक सबै कामकारबाही गर्नु छ । त्यसैले हामी जस्तोसुकै परिस्थिती आयेपनी समना गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ ।
उनको आत्तिएको मन विकल्पको खोजिमा लाग्यो । “युटयुब को सहारा लिए । त्यसपछि त मेरो दिन रात बितेको पत्तै भएन । म सजाबटका समान हरु । बनाउन लागे । कुकुर , बेबी गुगिया, कुसनका डिजाइन खोज्दै बनाउदै गर्न थाले ।” उनले हास्दै थपिन साच्चै भन्नू पर्दा लकडाउन त अबसर पो बन्यो मेरो लागी त । कुसनका डिजाइन ,गुडिया कोठा भरी सजिए। पसलमा पनि राख्नको लागि बनाए । अहिले पसल खोल्न केहि सहज भएता पनि ब्युटीपार्लर नचले पछि मर्का मा परेका छौं। आफुले सोचेको जस्तो नहुदा धेरै मानिस आत्तिएका छन। आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन। मेरो विकल्पले मलाइ अन्य कुरा सोच्नै दिएन।”
जस्तो परिस्थितिमा पनि बाच्न सबभन्दा पहिला त दृष्टिकोणमा स्पस्टता ल्याउनुपयो, जसले गर्दा आफ्नो क्षमताको पहिचान हुन्छ र आँट बढ्छ । महिलाहरु त्यही कारण समाज परिवर्तनका लागि गरिने विभिन्न अभियानहरुमा महिलाहरु पनि सहभागी हुन्छन् र विजय प्राप्त गर्छन् ।
नेपाली पत्रकारहरुको अन्तरराष्ट्रिय संजाल इन्जाको सहयोगमा रमा पन्थीद्वारा तयार पारिएको ।